War deg deg ah: Shariif Xasan oo ku dhowaaqay inuu iscasilay kana hadhay Doorashada Maamulka K/Galbeed | KALSHAALE
War deg deg ah: Shariif Xasan oo ku dhowaaqay inuu iscasilay kana hadhay Doorashada Maamulka K/Galbeed
Baydhabo ( Kalshaale ) Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo goordhaw Warbaahinta iyo masuuliyiin kula hadlay Madaxtooyada magaalada Baydhabo ayaa shaaca ka qaaday in uu ka tanaasulay in uu ka qeyb galo Doorashada Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed.
Ului Alaaa – Alalaas waaye waxaas.
” Gobtu waa tanaasushaa oo taariikh dambey rabtaa.
– Taangi Tigree kuma tiirsanoo tolkey u tanaasulaan
– Afar faataxaa ka roon taariikh xumoon tirmeyn.
Madaxweynaha Jubbaland Oo Furay Shirka Wasiirada Amniga Dowlad Goboleedyada
Governor Waare horow Boondheere bun ugu dubtey
Xaafna Shaakirow wakiishey
Shariif Tanaasulow tolkiis ka yeelay.
( Kablalax Taangi Kuukuuyo iyo Cadkaa Qaranimo uga roon).
* Taangi Kuukuyo waa tagaa sidow u tagey midkii Tigree, Taariikh xunse tirmi meeh.
Sharifoow iska fadhiiso oo Cambaha iska dhuuq intii aad cararilahayd adoo da’daa jooga.
Waxaa iigu daran koxdii uu ahaa Madaxwaynaha kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Kooxdii Kablalax ee u doortay Madaxwaynaha Mooryaanta Kablalax ee ku jira dagaalka hunguriga.
Dagaalkii ugu daba dheeraa ee Somaliya ka qarxa,kaasi oo ilaa haatan socda.
Daanyeer ayaa ka didey libaax markaas ayaa waxaa la cararey Libaax yar oo muddo Biyo la cabahayey daanyeerta.
Libaaxi weynaa ayaa gacanta soo qabtey markaas ayuu dhahey
War bal halmar dhawaaq – Gaagggggg
Daanyeertii ayaa didey, you see – waa adiga ninka daanyeertu ka carareyso markaas ayaad adiguna ayaga dabo ordeysaa.
Ayaa fadhiyey meel lagu duminhayo Qarankii Soomaaliyeed ha iga harto.
Madaxweyne waxaa u ah oo Soomaali oo dhan ka jecelyahiin UHUURO KUUKUUYO
soo maadan ogeyn inuu Kabo-qaad Ducaale lahaa Uhuuro waa walaalkey Kablalax Daarood ah.
Horeyna C/llaahi Mahbar iyo Faroole ayaa lahaa Meles waa walaalkeen Jaberti Tigree
– Meeshuu Cadku la galo ayaa Tol iyo Qaran u ah.
Waxaan filayaa in uu dumay geed hoos xun oo uu shariif somali u jiday,waxaan filayaa dhowr iyo toban sanno ayuu ka macaashay shacabka degaankaas wuxuu ahaa muqarib aan naxariis lahayn aaminsan in uu isagu un lacag ka haysto sidaa darteed uu iskaba leeyahay.
Waxaa ku xigga Gaas isaguna shacabka Puntland ma soo celin doonaan.
Axmed madobe meel dheer ma jiro isagu waa ka fudud yahay intan kale,duq xaaf na jilbaha ayaa dhulka loogu dhuftay walalaha galgaduud si hoose ayaa loo wada hadlay Carabay wuu tagayaa Xaaf 7 bilood buu dhamaysanayaa mana soo noqonayo frequecy walalaha galgaduud oo yara lumay waa la soo helay markaa waxaan ka rabnaa qoladaan Farmajo/Khayr af-cad oo Somalinimo.
1-Amaanka gacan bir ah lagu qabto.
2-Ciidan qaran oo qof kastaa isku aamin karo.
3-Canshuuraha oo 1 count leh.
4-Shacabka oo xaquuq nooc kastaa u siman yihiin.
5-Cadaaladda oo wax laga qabto haddii intaa laga waayo
WAA IN LAGU GUURAA DAAQADAHA LOOGA DHACAA DHAGAX LAGU DILAA.
BYE BYE SHARIIF
kkkkk Abdullahi Sheekh Xasan ninkii ka cararay ESOL COURSE.
Ninkaan wuxuu baran waayay course ESOL ah wuxuuna dhihi jiray eebow yaa hela 100,000 kun pound guri ooga gato Birmingham kkkkkk
British passport ayuu sugaayay markuu helayna wuxuu aaday musuqmaasuq kkkkk
damiin oo dhan baa tagay dalkaas ayaa la rabaa inuu cagadhiisa ku istaago.
Abdullaahi Sh. Xassan wuxuu ka loo ku jirey -Kabo-qaadyadii Meles Tigree,
Aniga, Eng Yariisow,Tarsan, Xildhibaan iyo Cumar Calasow ayaa ka ceyriney UK, asaga iyo Mid Xawaadle ahaa oo Xooshow la dhaho.
Adeerkey Cali Jarmal ayaa dhahey, Kan naga daaya waa Lo’a giziye.
Waar Odaygii Xaraamiga ahaa ee soo taagnaa ilaa wakhtigii Cabdullaahi Amxaar soo Xambaare wuu ku daayay.Waa in la xidhaa oo Dambiyadii uu galay dib loo eegaa.
Somaliya waxay balaayo ku dhigtay – wixii dambi la galay lama hayo cidloo xidhayba.
Shariif waa in laga bilaabaa
Waxaa hada final isugusoo baxay kooxda farmaajo iyo labada maamulgoboleed ee daaroodka hawiyihii iyo raxanweyntii waa lasoo dardaray coyaarta harsan waa ciyaar adag wax lafiirsado ayeey leedahy kkkkkk
Intaasuba waa raganimo ninka ragga in uu maalin uun tanasulo. Wexey u geleysaa tariikhda.
Bye bye shariif xasan.
Kuleey kuwaan ogahay ma gartaan in ay tanasulaan in qoorta laga soo qabto moyee.
Fashilkii federaalka hunguriga ayaa socdo
Axmed madoobe tolow ma leeyahay xaniinyaha shariif xasan oo kale mise isagu kaare kukuuyo ayuu dugaashan yahay.
Axmed Madoobe oo shir gudoominaya wasiiro ku sheegii Mooryaanta ayaa lagu kala yaacay Baydhabo kkkkkkkkkkkkkkkk
Mr Sakiin Libaaxbaa raamsaday kkk
Mr Madoobe waa nest victim.
Mr bahal waan ku salaamay
Shariif xasan isagaa ayaa shaqsi xun ah laakiin wuxuu kasoo jedaa dadkii gobta ahaa. Ashraaf aka samaale.
Axmed madoobe in la dilo ama laga hantataqiya moyee firba uma lahan in uu kursi ama hunguri ciyaar uga tago. Kkkkkk
Xasan cali kheyre ayaa isoo maagay mana cararin been dheh
Shariif Xasan waad mahaxdsantahay hadaad isgaratay.
Koofur Galbeed waji cusub iyo nin energi haya u baahan yihiin.
Guul reer K Galbeed.🌎
Haa,waa nin Samaale ah,laakiin waxaa soo tababaray – Cabdullaahi Amxaar xambaare.Akhirkii waa kaa isdaba qabtay ee iska ragay kkkk
Wuxuu ahaa Libaax Dayeer la qadhaabtay.
15 sano ayuu ismoodayay inuu Dayeeryahay.
Maanta ayuu Ogaaday inuu Libaax yahay.
In la cunayo Shariif oo aanu isasoo sharaxayn waxaan maqlay,3 cisho ka hor,laakiin warkaasi aadbaan u sugayay inuu run noqdo.
aniga fikir ahaan dagaal oogayaalka cusub iyo candho wadaag waa isku key mid intuba talo qaran ma hayaan eee ha is wada casileen oo dhalinyaro wadanka hore u socodsiinkarata xilka halagu wareejiyo
@Dabshid,Garqaad,Mr Bahal Lop waan idin salamayaa sidoo kale Maxamuud.
Cayaarta 2 maamul ee daaroodka waa ugu sahlan tahay.
1-Reer Puntand iyagaa isku maqan mana filaayo dabayshan in ay is hortaagi doonaan A-Ethiopia taageero lagama haysto
B-International community(spoilers)iridaasna waa laga soo xiray.
C-Kenya albaabkeeda wuu soo xirmay.
Markii horeba meelo waaweyn ma aysan gaarsiisnayn ee itoobiya/kenya un baa jaajuusiin loo ahaa.
D-Absame iyagaa la kala celcelinayaa oo Axmed madobe wuxuu la yimid sheekadii daanyeer Bare hiiraale,Morgan,iyo Jees.
Ilkayar baa nasoo weeraraysa waana la waayay ankee meel 1 habeen weerar looga hadlay waliba nin kale oo Absame ah keena aan la shaqaynee ayuu diidan yahay.
Anigoo ka mid ah taageerayaasha waaweyn ee Axmed madobe markuu fakar qabiil la yimid baan ka haray,isagu wuxuu ku xiran yahay inta Buaale ciidanka dawaladda ay ka qabsanayaan Kismaayo cid doorasho ku qabanaysa ma jirto Buaale waxaa laga soo galayaa 3 jiho-Mudul baraawe xamarka Jilib,dhinacaan Diinsoor iyo dhanka Baardheere Axmed isagoon illalo wadan ayuu imanaya Buaale ama wuu is casilayaa.
Sidoo kale just last week illaa 50 qori ayaa lagala baxsaday Axmed ciidankii kuwii reer kilalka ayaa sameeyay ma aqaan sababta
WAXAAN KA RABNAA QOLADAN VILLADA WAR QOF WEYN OO SOMALI AH, NADIIF KA AHA QABIIL IN AY NOO KEENAN.HADDII AY KEENI WAAYAAN QOFKA UGU HOREEYO EE KU JIHAADA AYAAN NOQONAYAA INSHA ALLAH
Sakiin markii horeba mahayn nin meesha Xukuma. Xabashi iyo qadaadwayn ay maamushay Bay iyo bakool isagana wuxuu ahaa suurad qudha.
Is casiladiisu waa been macna badan samayn karayn bal dan baan u gaysay.
Axmad Madoobe isagana ma sii joogi doono waayo waxaa soo socdaa rag culus oo degaan ah oo doonahaya inay ka xoreeyaan degaankaasi.
Abdiweli waxaan filayaa in reer Puntland meel saari doonaan meel dhow.
Marka qabyaaladda halaga gudbo.